छडको मूल्यमा वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home १० वर्ष अघि छडको मूल्यमा वृद्धि
on: July 25, 2018 १० वर्ष अघि
छडको मूल्यमा वृद्धि
काठमाडौं । टीएमटी छड तथा स्टिल उत्पादक चार कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको मूल्य वृद्धि गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै गोयनका स्टिल्स्, साःख स्टिल, हिमाल स्टिल र अशोक स्टिलले मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
भारतले कच्चा पदार्थको निर्यातमा अतिरिक्त ११ प्रतिशत ड्युटी लगाएपछि त्यसबाट बन्ने वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरिएको कम्पनीका स्रोतहरूले बताएका छन् । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०६५/६६ को पेस्की बजेटमा कर छुटको बारेमा केही उल्लेख नगरिएपिछ मूल्य वृद्धिको विकल्प नरहेको एक स्टिल उद्योगीले बताए । गोयनकाको उत्पादन एभरोल टीएमटी छडको कारखाना गेट मूल्य प्रतिकिलो रु. ९३.५० देखि रु. ९४.५० सम्म पु¥याइएको छ । सो छडको मूल्य सात महिनाअघि रु. ४८ देखि ५० को बीचमा थियो भने दुई महिनाअघि रु. ८५ को हाराहारीमा खुद्रा बजारमा बिक्री भइरहेको थियो ।
सो कम्पनीको एमएम ८/२५ को मूल्य रु. ९३.५०, एमएम १०/१२/१६/२० को मूल्य रु. ९२ र एमएम २८/३२ को मूल्य रु. ९४.५० कायम गरिएको छ । सो बिक्री मूल्यमा थप अन्तःशुल्क तथा मूल्य अधिवृद्धि कर पनि लाग्नेछ भने कारखाना रहेको ठाउँ बर्सौलाी (रूपन्देही) बाट अन्य स्थानमा पुर्‍याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च थप लाग्ने कम्पनी स्रोतले बताएको छ ।
वर्ष ३, अंक ४६, २०६५ साउन ६–१२